Inqubomgomo Yobumfihlo | Law & More B.V.
IZIXHOBO ZOKUFUNDISA IOFISI YOSapho
UKUFudUKELA KWABO BANGAPHANDLE- KUNYE NEGQWETHA LOKUFUTHA
IPROPATI YOBUCHULE (IP) IGQWETHA
IINQUBO NEZINTO OZITHENGAYO
IIPHILANTHROPY NEZISEKO ZOKUBA NESIQINISEKISO
I-EURASIA kunye ne-CIS DESK
IIPARMA NESAYENSI ZOBOMI
I-NETHERLANDS DUTCH BAR NXIBELELWANO
UMBUTHO WOMTHETHO WEHLABATHI
IMIBA YOBHALISO LWEZOBHALISO
Law & More iqhuba idatha yobuqu. Ukwazisa ngendlela ecacileyo nangokucacileyo malunga nokuqhutywa kwedatha yobuqu, le ngxelo yabucala iyayilwa. Law & More Ihlonipha idatha yakho yobuqu kwaye iqinisekisa ukuba ulwazi lobuqu esinikezwe lona luphathwa ngendlela eyimfihlo. Le nkcazo yabucala isebenzisa uxanduva lokwazisa ngezifundo malunga nobani Law & More iqhuba idatha yobuqu. Esi sibophelelo sivela kuMmiselo oKhethekileyo wokuKhuselwa kweDatha (GDPR). Kule ngxelo yabucala yeyona mibuzo ibalulekileyo ngokubhekisele ekusebenzeni kwedatha yakho Law & More ziya kuphendulwa.
Law & More Ngumlawuli ngokubhekisele ekusebenzeni kwedatha yakho yobuqu. Law & More ikhoyo De Zaale 11 (5612 AJ) I-Eindhoven. Ukuba kuphakama imibuzo malunga nesi siteyitimenti sabucala, ungaqhagamshelana nathi. Ungasifowunela ngenombolo ethi +31 (0) 40 369 06 80 kwaye nge-imeyile ku [imeyile ikhuselwe]
Idatha yomuntu buqu yonke ingcaciso esixelela okuthile ngomntu okanye onokudityaniswa nomntu. Ulwazi oluxelela ngokungangqalanga ngento malunga nomntu, nalo luthathwa njengedatha yobuqu. Kule ngxelo yabucala, idatha yobuqu ithetha lonke ulwazi olo Law & More Iinkqubo ezivela kuwe nendlela onokuchongwa ngazo.
Law & More iqhuba idatha yobuqu ukuze kubonelelwe ngeenkonzo kubathengi okanye idatha yobuqu ebonelelwa zizifundo zedatha ngokwabo. Oku kubandakanya iinkcukacha zoqhakamshelwano kunye nezinye iinkcukacha zobuqu eziyimfuneko ekuphatheni kwetyala lakho, idatha yobuqu oyigcwalise kwiifom zonxibelelwano okanye iifom zewebhu, ulwazi olunikezela ngexesha lodliwano-ndlebe (lodlwengulo) lodliwanondlebe, idatha yobuqu ekhoyo kwiiwebhusayithi zikarhulumente okanye idatha yobuqu inokufumaneka kwiirejista zikarhulumente, ezinje ngeRejista yeCadastral kunye neRejista yoRhwebo yeCandelo leRhwebo. Law & More Iqhuba idatha yobuqu ukuze unikezele ngeenkonzo, ukuphucula ezi nkonzo nokukwazi ukunxibelelana nawe njengesifundo sedatha.
Yedatha kabani egcinwe kuyo Law & More?
Isiteyitimenti sabucala siyasebenza kubo bonke abantu idatha yabo ekuqhubekekiswa ngayo Law & More. Law & More iqhuba idatha yobuqu yabantu esinabo ngokungathanga ngqo okanye ngqo, esifuna ukuba nabo okanye ubudlelwane. Oku kubandakanya aba bantu balandelayo:
(ezinokubakho) abathengi Law & More;
abantu abanomdla kwiinkonzo ze Law & More;
abantu abaqhagamshelwe kwinkampani okanye umbutho apho Law & More uye, wafuna ukuba okanye wayenobuhlobo;
iindwendwe zeiwebhusayithi ze Law & More;
Bonke abanye abantu abanxibelelana Law & More.
Injongo yokuqhutywa kwedatha yobuqu
Law & More Iqhubekeka idatha yakho yobuqu ngezi zinto zilandelayo:
Ukubonelela ngeenkonzo zomthetho
Ukuba usiqasha ukuze unikezele ngeenkonzo zomthetho, sicela ukuba wabelane nathi ngeenkcukacha zonxibelelwano. Kuya kuba yimfuneko ukufumana enye idatha yobuqu ukuze usingathe imeko yakho, kuxhomekeke kuhlobo lwento leyo. Ukongeza, idatha yakho yobuqu iya kusetyenziselwa i-invoice yeenkonzo ezibonelelweyo. Ukuba iyimfuneko ukubonelela ngeenkonzo zethu, sinikezela ngeenkcukacha zakho kubantu besithathu.
Law & More irejista idatha yakho yobuqu kwinkqubo kwaye igcina le datha ukuze ikunike ulwazi. Oku kunokuba lulwazi ngokubhekisele kulwalamano lwakho kunye Law & More. Ukuba awunabudlelwane naye Law & More (okwangoku), uyakwazi ukucela ulwazi usebenzisa ifomu yoqhakamshelwano kwiwebhusayithi. Law & More iqhuba idatha yobuqu ukuze unxibelelane nawe kunye nokubonelela ngolwazi oluceliweyo.
Ukufezekisa uxanduva olusemthethweni
Law & More iqhuba idatha yakho yobuqu ukuze kufezekiswe izibophelelo zomthetho. Ngokomthetho kunye nemigaqo yokuziphatha esebenzayo kumagqwetha, sinyanzelekile ukuba singqinisise isazisi sakho ngokusisiseko sencwadi yesazisi.
Law & More uqokelela idatha yakho buqu ngenjongo yokuqesha nokukhetha. Xa uthumela isicelo somsebenzi ku Law & More, idatha yakho yobuqu igciniwe ukujonga ukuba uza kumenyelwa udliwanondlebe nomsebenzi kunye nokunxibelelana nawe malunga nesicelo sakho.
Law & More isebenzisa iinethiwekhi ezininzi zeendaba zentlalo, ezizezi, i-Facebook, i-Instagram, i-Twitter kunye ne-Intanethi Ukuba usebenzisa imisebenzi kwiwebhusayithi ngokubhekisele kwimithombo yeendaba zentlalo, siyakwazi ukuqokelela idatha yakho yobuqu kusetyenziswa iinethiwekhi zentlalo eendaba ezichaphazelekayo.
Imilinganiselo yokusebenzisa iwebhusayithi
Ukulinganisa ukusetyenziswa kweshishini kwiwebhusayithi yayo, Law & More isebenzisa inkonzo ye-leadinfo eRotterdam. Le nkonzo ibonisa amagama enkampani kunye needilesi ezisekwe kwidilesi ye-IP yeendwendwe. Idilesi ye-IP ayifakwanga.
Imigangatho yokusetyenziswa kwedatha yobuqu
Law & More Iqhubekeka idatha yakho yobuqu kwisiseko esinye okanye ngaphezulu kwezi zizathu zilandelayo:
Law & More Ungaqhuba idatha yakho yobuqu kuba unike imvume yokuqhubekeka. Unelungelo lokurhoxisa le mvume ngalo lonke ixesha.
Ngokusekwe kwisivumelwano (esiya kugqitywa)
Ukuba uyaqesha Law & More ukubonelela ngeenkonzo zomthetho, siya kuqwalasela idatha yakho yobuqu ukuba kunye nokwandiswa okuyimfuneko ukwenza ezi nkonzo.
Idatha yakho yobuqu iya kusetyenzwa ukwenzela ukuthobela uxanduva olusemthethweni. Ngokwe-Dutch Anti yokuhluthwa kwemali kunye nomthetho wokuxhasa ngezemali ubugrogrisi, amagqwetha anyanzelekile ukuba aqokelele kwaye abhale phantsi ulwazi oluthile. Oku kubandakanya ukuba, phakathi kwabanye, izazisi zabathengi kufuneka ziqinisekiswe.
Law & More Iqhubekeka idatha yakho yobuqu xa sinomdla osemthethweni wokwenza oko kwaye xa ukuqhubekeka kungaphuli ilungelo lakho lokuba yimfihlo ngendlela engahambelaniyo.
Ukwabelana ngeenkcukacha zakho nomntu wesithathu
Law & More Chaza idatha yakho yobuqu kubantu besithathu kuphela xa oku kufanelekile ukubonelela ngeenkonzo zethu, sihlonipha izizathu ezichazwe ngaphambili. Oku kunokubandakanya ukugqitywa kwezivumelwano, ukubhengeza idatha yobuqu malunga neenkqubo (zezomthetho), imbalelwano neqela elichasene naye okanye wenza ukuba umntu wesithathu abamele kwaye athunywe ngu Law & More, njengababoneleli be-ICT. Ukwengeza, Law & More inokubonelela ngedatha yobuqu kubantu besithathu, njengegosa elongameleyo okanye igunya elimiselwe esidlangalaleni, ngaphandle kokuba kukho umsebenzi osemthethweni wokwenza njalo.
Isivumelwano sokuprosesa siya kugqitywa kunye nomntu ngamnye oqhuba idatha yakho egameni lakhe kwaye ayale Law & More. Ngenxa yoko, yonke iprosesa ikwanyanzelekile ukuba ithobele i-GDPR. Amaqela esithathu anikwe amandla yi Law & More, kodwa zibonelela ngeenkonzo njengomlawuli, linoxanduva lokuthobela i-GDPR. Oku kubandakanya umzekelo, iingxelo zemali kunye neeariari.
Ukhuseleko lweenkcukacha zakho
Law & More Ixabisa ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwedatha yakho yobuqu ngokukhulu kwaye inikezela ngamanyathelo afanelekileyo obuchwephesha kunye nawombutho ukuqinisekisa inqanaba lokhuseleko elifanelekileyo emngciphekweni, ukugcina imeko yobugcisa isengqondweni. Nini Law & More isebenzisa iinkonzo zomntu wesithathu, Law & More Uya kurekhoda izivumelwano malunga namanyathelo anokuthathwa kwisivumelwano somqhubekekisi.
Law & More izakugcina idatha yobuqu eqhubekekayo engekabi yimfuneko ukuze kufikelelwe kwinjongo ezichaziweyo apho bekuqokelelwe khona idatha, okanye kunokuba kufunwa yimithetho okanye imigaqo.
Amalungelo abucala ezifundo zedatha
Ngokomthetho wabucala, unamalungelo athile xa idatha yakho yobuqu isenziwa:
Unelungelo lokufumana ulwazi malunga nokuba zeziphi iinkcukacha zakho ezenziwayo kunye nokufikelela kwezi datha zobuqu.
Unelungelo lokucela umlawuli ukuba alungise okanye agqibe idatha yakhe echanekileyo okanye engazalisekanga.
Ilungelo lokucima ('ilungelo lokulityalwa')
Unelungelo lokucela Law & More ukucima idatha yobuqu eqhubayo. Law & More iya kucima le datha yobuqu kwezi meko zilandelayo:
ukuba idatha yobuqu ayisasebenzi ngokuhambelana nenjongo yokuqokelelwa kwayo;
ukubangaba urhoxisa imvume yakho esekwe kuyo inkqubo kwaye akukho enye indawo yomthetho ekusetyenzwa kuyo;
ukuba uyala ukuqhubekeka kwaye akukho zizathu zigqwesileyo zomthetho;
ukuba idatha yobuqu yenziwe ngenkqubo engekho mthethweni;
ukuba idatha yobuqu kufuneka icinywe ukuze ithobele uxanduva olusemthethweni.
Ilungelo lokuthintela ukusebenza
Unelungelo lokucela Law & More ukumisela ukusetwa kwedatha yobuqu xa ukholelwa ekubeni ayimfuneko ukuba ulwazi oluthile luqhubekekisiwe.
Ilungelo lokuphatheka kwedatha
Unelungelo lokufumana idatha yobuqu leyo Law & More iinkqubo kunye nokuhambisa idatha kwenye yolawulo.
Unelungelo, nangaliphi na ixesha, lokuchasana nokulungiswa kwedatha yakho yobuqu Law & More.
Ungasifaka isicelo sokufikelela, ukulungiswa kwakhona okanye ukugqitywa, isiza, ukuthintelwa, ukuthathwa kwedatha okanye kurhoxiso lwemvume enikezelweyo Law & More ngokuthumela i-imeyile kule dilesi ye-imeyile ilandelayo: [imeyile ikhuselwe]. Uya kufumana impendulo kwisicelo sakho kwiiveki ezine. Kunokubakho iimeko apho Law & More awukwazi (ngokupheleleyo) ukusebenzisa isicelo sakho. Umzekelo unokuba njalo xa ubumfihlo babameli okanye ixesha lokugcinwa komthetho libandakanyeka.
Ingxelo ye Cookie
Inkqubo yeZikhalazo zeOfisi
E. [imeyile ikhuselwe]